Landa izindaba ezifakiwe ze-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Januwari 28, 2019 0 Comentarios 2660
Impumelelo ekhiqizwe yizindaba ze-Instagram isifinyelele ezingeni lokuthi isbalo esivela kubantu sinaso kukhule kakhulu. Lokhu kudale ukuthi ipulatifomu igxile ekwengezeni izinketho ezintsha ekusebenzeni kwezindaba, ukulenza ligijime kakhulu futhi kuthande ukusebenzisana kwabasebenzisi bayo. Izindaba ezifakiwe Ngenye yalezi zibuyekezo, ngokungangabazeki ekwazile ukuzibeka kahle kakhulu. Ngalesi sizathu, kungenzeka ukuthi futhi uzithandile izindaba zendabuko, nawe uyazithanda lezi, futhi, ufuna ukulanda izindaba ezivelele ze-Instagram zabanye.
Naphezu kwalokho Instagram kugcina njalo ukusungula iplatifomu yayo, asikwazi ukuthola kukho ukukhetha ukulanda izindaba ezifakiwe. Ngakho-ke, kufanele sebenzisa ezinye izinhlelo, ezahlukahluka ngokuya ngohlelo lokusebenza lweselula yakho (i-iOS noma i-Android) noma uma usebenzisa i-web version ye Instagram. Kuzo zonke lezi zimo, izinyathelo zilula kakhulu futhi zizothatha imizuzu embalwa.
Landa Izindaba ze-Instagram (i-Android)
Uma ungumsebenzisi wensizakalo ye-Android, kufanele usebenzise uhlelo oluthile, empeleni oluphephe kakhulu, olubizwa "I-Instagram Mod". Kulokhu, landela izinyathelo ezingezansi, ukuze ukwenze ngokuphepha okuphelele.
Into yokuqala oyiphuzayo ukuya kwisiphequluli sakho bese uthayipha injini yokusesha "I-Instagram Mod". Lapho uhlelo lokusebenza luvela uyalikhetha bese ucindezela "Landa". Ukulanda kushesha kakhulu, yize ijubane lizoncika ekujuleni kwe-Intanethi yakho.
Lapho ukulanda kuqediwe, kuzofanela uye ku Imenenja yefayela yefoni yakho bese uvula ifolda ethi "Landa". Uma ungaphakathi kwefolda, phansi, uzothola ifayela olilandile, njengoba unentshisekelo kuhlelo lokusebenza kuphela, likhethe bese ucindezela "Faka". Kule nqubo, ungabuzwa uma ufuna landa inguqulo entsha, uma uthanda, yamukela bese uqala ukufaka.
Usuvele ufake uhlelo lokusebenza, ulufake futhi ukungena nge-akhawunti yakho ye-Instagram. Lokhu kwenziwa, ungabona konke okuqukethwe abangane bakho, abaculi namakhasi owalandelayo.
Landa izindaba ezifakiwe
Ekugcineni, khetha indaba efakiwe ofuna ukuyilanda. Uma uyivula, cindezela i- uphawu lwamaphuzu amathathu. Ngemuva kwalokho, kuzovela imenyu enezinketho eziningi "Landa" futhi ukulanda kuzoqala, okuzobe sekumi ngomzuzwana. Manje, bhekisa ku igalari yeselula yakho bese ubheka ifolda eyakhiwe ngegama elithi "Gb Instagram", kuzogcinwa yonke imfucumfucu oyenzayo. Le nqubo ingaphindwa kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Landa Izindaba Ze-Instagram (i-iOS)
Uma kwenzeka ungumnikazi we-iPhone, inqubo ye download izindaba ze-Instagram, Ihluke kakhulu, kepha njengasekuqaleni ilula kakhulu.
Into yokuqala ozoyenza ukulanda uhlelo I-AppValley Beta, kusuka kusiphequluli sakho. Uma sesilungile, singakwazi ukuqala ngezinyathelo zolunye uhlelo lokusebenza.
Faka isitolo "I-AppVelley Beta", iya kwinketho ethi "Umtapo wolwazi", kuzovela imenyu yokudonsela phansi, khetha "Izinhlelo zokusebenza" bese uthayipha enjini yokusesha "Instagram ++", lapho uhlelo lokusebenza luvela uyalikhetha futhi ulufaka.
Ekugcineni, uvula uhlelo lokusebenza futhi ungabona zonke izithombe futhi videos labangane bakho Khetha lowo ofuna ukumlanda bese ucindezela isithonjana somcibisholo ophansi. Uma wenza lokhu, uzoba nenketho yokukhetha usayizi wokulanda futhi uma ufuna ukukugcina kuwe iseli lesithombe noma ufuna ukusifunda, khetha eyodwa oyithandayo futhi yiyo! Manje ungalanda zonke izindaba ezifakiwe ozifunayo.
Landa izindaba ze-Instagram ezivela kuwebhu
Eqinisweni olisebenzisayo I-Instagram kusuka kwi-PC yakho, unamawebhusayithi amathathu azokusiza ukulanda izindaba ezivelele zabanye abasebenzisi namakhasi owalandelayo. Owokuqala uwukuthi:
Le webhusayithi ingenye okuhle kakhulu ngokulanda izindaba, ngoba ikuvumela ukuthi ufinyelele ukubuka kuqala kwendaba ngayinye ekhishwa ngumsebenzisi othile. Kule webhusayithi ungabona izithombe namavidiyo ngokwahlukile futhi ngayinye inenkinobho yokulanda, okukucindezela kuyokusindisa okuqukethwe ngqo ku-PC yakho.
Njenge-Hadigig, le webhusayithi ikuvumela ukuba uyilande imlando Okujwayelekile futhi okuvelele. Noma kunjalo, isikhombimsebenzisi sawo siyancipha, yize inikezwe imisebenzi yayo engeke ibe yinkinga.
Uma ufaka leli sayithi, ungacindezela okukhethwa kukho "Landa Izindaba Ezifakiwe" ukufinyelela konke.
Ekugcineni, unale nketho evumela ukuthi wena ubone isithombe ngasinye nevidiyo ngaphambi kokuyilanda, ngaphezu kwalokho ukukunikeza imininingwane ebalulekile yomsebenzisi lapho sifuna ukulanda khona izindaba ezifakiwe, ezinjengokuthi: i-biography, inani eliphelele lezindaba ezitholakalayo, igama, abalandeli, phakathi kweminye imininingwane.
Ngokungafani namanye amasayithi, lokhu akukunikezeli ukulandwa okuqondile, kepha ikuvulela kuthebhu efanayo bese uyikhipha ku-PC.
1 Landa Izindaba ze-Instagram (i-Android)
1.3 Ngena ngemvume
1.4 Landa izindaba ezifakiwe
2 Landa Izindaba Ze-Instagram (i-iOS)
2.3 Landa izindaba ezifakiwe
3 Landa izindaba ze-Instagram ezivela kuwebhu